Global Voices teny Malagasy » Mpikatroka Saodiana Notsaraina, Tsy Navela Nifandray Tamin’ireo Mpisolovavany · Global Voices teny Malagasy » Print
Mpikatroka Saodiana Notsaraina, Tsy Navela Nifandray Tamin'ireo Mpisolovavany
Voadika ny 03 Septambra 2013 6:21 GMT 1	 · Mpanoratra Anas Soliman Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Ity lahatsoratra ity dia fitantarana manokana ataonay momba ny: Reformista ao amin'ny Fitsarana ao Arabia Saodita 
Nanomboka androany vao maraimbe, 1 Septambra ny fotoam-pitsarana faha-efatra an'i Umar al-Saeed , ao an-tanàna Saodiana ao Buraydah. Mpikambana mpitantana ny fikambanana lehibe miaro ny zon'Olombelona ao amin'ny firenena, Fikambanana miaro ny zo sivily sy politika Saodiana  (ACPRA) i al-Saeed. Mbola nosakanan'ny mpitsara  tsy hifandray tamin'ny mpisolovavany indray ity mpikatroka nogadraina ity mba “hahalalany ny tena momba azy manokana, na koa mpanaraka fotsiny ihany izy.” Noterena hiteny mafy izy raha nikasa haka hevitra tamin'ireo mpisolovavany amin'ny zavatra rehetra.
Tamin'ny fotoam-pitsarana farany teo, nitaraina momba ny herisetra mahazo azy any am-ponja i al-Saeed ka nangataka fanadihadiana. Nilaza ny mpitsara androany fa tsy misy idirany izany fangatahana izany saingy afaka mampiato ny fakàna am-bavany izy mandra-panaovan'ny Biraon'ny Famotorana sy ny Famaizana fanadihadiana. Nanambara ireo mpisolovava fa tsy nisy nilàna azy akory ny fiezahan'izy ireo hifandray tamin'ny Birao.
Fanampin'izany, nangataka ireo mpisolo vava mba hanesorana ny gadra vy eo amin'ny tanan'ny voampanga mandritra ny fotoana fakàna am-bavany, saingy nolavin'ny mpitsara tsy nisy fanazavana izany. Nolavin'izy ireo ihany koa raha nilaza ny mpitsara fa mpanaraka fotsiny ihany i al-Saeed.
Nangataka fampihatoana iray volana ireo mpisolovava mba hahafahan'izy ireo mampitsahatra ny herisetra ao am-ponja. Amin'ny 29 Oktobra indray ny fotoam-pitsarana manaraka.
Mbola voaràra tsy nahazo manatrika ny fotoam-pitsarana politika azon'ny daholobe hatrehina ireo vehivavy. Nilaza ny mpitsara iray fa “efa ampy ny fanatrehan'ny lehilahy.” 
Tao amin'ny Twitter, nifampizara izay zava-nitranga tao amin'ny fitsarana tamin'ny alalan'ny teny ifankafantarana hoe #عمر_السعيد , anaran'i al-Saeed amin'ny teny Arabo ireo mpiserasera .
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2013/09/03/51195/
 Reformista ao amin'ny Fitsarana ao Arabia Saodita: https://globalvoicesonline.org/specialcoverage/reformists-on-trial-in-saudi-arabia/
 Umar al-Saeed: https://twitter.com/181Umar
 Fikambanana miaro ny zo sivily sy politika Saodiana: https://en.wikipedia.org/wiki/Saudi_Civil_and_Political_Rights_Association
 nosakanan'ny mpitsara: https://globalvoicesonline.org/2013/08/19/saudi-human-rights-activist-faces-maltreatment-by-interrogator-and-judge/
 “efa ampy ny fanatrehan'ny lehilahy.”: https://globalvoicesonline.org/2013/06/24/saudi-activist-sentenced-to-eight-years-in-prison/